လူရွှင်တော်စံလင်းရဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှု အရှုပ်တော်ပုံ နှစ်နာသူတို့ရဲ့ နောင်တ ပြေပြေလည်လည် လုပ်ကြပါဟ နွားကွဲရင် ခွေးဆွဲမယ်နော် #အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် – Shan Ma Lay
May 30, 2021 aung aungLeaveaComment on လူရွှင်တော်စံလင်းရဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှု အရှုပ်တော်ပုံ နှစ်နာသူတို့ရဲ့ နောင်တ ပြေပြေလည်လည် လုပ်ကြပါဟ နွားကွဲရင် ခွေးဆွဲမယ်နော် #အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်
ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ပြန်မပေးပဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ လူရွှင်တော်စံလင်းရဲ့လိမ်လည်မှုကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော်ချစ်စု
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီကာလမှာ အားလုံးလိုလို အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော် နေကြရတာပါနော်။ အချင်းချင်း အခက်အခဲဖြစ်နေတာကို တစ်ဖက် တစ်လမ်းကနေ ကူညီပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း တွေလည်း ရှိကြပါတယ်နော်။
ဒီလိုရှိကြပေမယ့်လည်း နောက်ေကျာကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူကတော့ ရှိကြစမြဲပါပဲနော်။ လူရွှင်တော် ပေါ်လေးရဲ့သား ချစ်စု ကတော့ သူ့ဆီက ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံဆယ်သိန်း ပြန်မပေးဘဲ ပတ် ရှောင်ပြေးနေတဲ့ လူရွှင်တော် စံလင်းရဲ့အကြောင်းတွေကို ဖွင့်ချလိုက် ပါပြီနော်။
” လူတိုင်းအဆင်မပြေတာကို လက်ခံတယ်ငွေဆယ်သိန်းနီးပါး ချက်ခြင်းပြန်ပေးဖို့လည်းမပြောပါဘူး ဖုန်းလေးတော့ကိုင် အဆက်အသွယ်လေးလုပ်ပြီး အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် လေးပြောပေါ့….ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေးထားပြီး နည်းနည်းခြင်းဖဲ့ပေး တာတောင်ရတယ်…တကယ် အံဩတယ်။ ခင်ဗျားနားက ခင်ဗျား တပည့် တွေ ကပါ ဝိုင်းလိမ်ပေးကြ သေးတယ်… တရားကျဖို့ အတော် ကောင်းသ ဗျာ….
ယုံစားမိတဲ့ ကျူပ်တို့အမှားပါပဲ ပြေးထား နေတိုင်း တင်ပေးမယ် အနုပညာသမားလို့ ပြောရမှာတောင် အတော် ရှက်စရာ ကောင်းတယ်….” လို့သူရဲ့ လူမှု့ ကွန်ရက် ကနေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်း ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် သော နေ့ရက် များပိုင် ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။
ေခ်းထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြျပန္မေပးပဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္စံလင္းရဲ႕လိမ္လည္မႈကိုဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္ခ်စ္စု
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီကာလမွာ အားလုံးလိုလို အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ ေနၾကရတာပါေနာ္။အခ်င္းခ်င္း အခက္အခဲျဖစ္ေနတာကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းကေန ကူညီေပးၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္ေနာ္။ဒီလိုရွိၾကေပမယ့္လည္း ေနာက္ေ က်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးတဲ့သူကေတာ့ ရွိၾကစၿမဲပါပဲေနာ္။လူ႐ႊင္ေတာ္ ေပၚေလးရဲ႕သား ခ်စ္စု ကေတာ့ သူ႔ဆီက ေခ်းထားတဲ့ ပိုက္ဆံဆယ္သိန္းျပန္မေပးဘဲ
ပတ္ ေရွာင္ေျပးေနတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္ စံလင္းရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို ဖြင့္ခ် လိုက္ ပါၿပီေနာ္။” လူတိုင္းအဆင္မေျပတာကို လက္ခံတယ္ေငြဆယ္သိန္းနီးပါး ခ်က္ျခင္းျပန္ေပးဖို႔လည္းမေျပာပါဘူး ဖုန္းေလးေတာ့ကိုင္ အဆက္အ သြယ္ေလးလုပ္ၿပီးအက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ေလးေျပာေပါ့….ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားေလးထားၿပီး နည္းနည္းျခင္းဖဲ့ေပး တာေတာင္ရတယ္…တ ကယ္ အံဩ တယ္ ခင္ဗ်ားနားကခင္ဗ်ား တပည့္ ေတြ ကပါ ဝိုင္းလိမ္ေပးၾက ေသးတယ္… တရားက်ဖို႔ အေတာ္ ေကာင္းသ ဗ်ာ….
ယုံစားမိတဲ့က်ဴပ္တို႔အမွားပါပဲ ေျပးထား ေနတိုင္းတင္ေပးမယ္ အႏုပညာသမားလို႔ေျပာရမွာေတာင္ အေတာ္ ရွက္စရာ ေကာင္းတယ္….” လို႔သူရဲ႕ လူမႈ႕ ကြန္ရက္ ကေန တင္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အ ခု လို ဝင္ ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ တစ္ ေယာက္ျခင္းစီတိုင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ေသာ ေန႔ရက္ မ်ားပိုင္ ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါ ေစ လို႔ ဆု ေတာင္းေပးလိုက္ ပါတယ္။
လူတစ်ယောက်ကို ကူညီလိုက်တာက ကမ္ဘာကြီးကို မပြောင်းလဲစေပါဘူး လို့ ပွင့်လင်းစွာပြောလာတဲ့ အသဲကြော်လေး ဆောင်းယွန်းစံ
မနေ့ညကဘဲ သူမရဲ့ နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ ကနဦး သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ